အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်ရဲ့ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် မတိုင်မီ ကလော့ကို ဘာတောင်းဆိုခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဆီမီကတ် - xyznews.co
အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်ရဲ့ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် မတိုင်မီ ကလော့ကို ဘာတောင်းဆိုခဲ့သလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ဆီမီကတ်
ကော့စတပ်ဆီမီကတ်ဟာ လီဗာပူး အတွက် ဟီးရိုးတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယာဂန်ကလော့ရဲ့ အသင်းဟာ မနေ့ညက ၀င်ဘာလေမှာ ချဲလ်ဆီးကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ အနိုင်ရကာ အက်ဖ်အေဖလားကို ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဂရိဘယ်နောက်ခံလူ ဆီမီကတ်က အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်ရဲ့ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် မတိုင်မီ အသင်းရဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ပင်နယ်တီကို ကန်လို့ ရမလားဆိုပြီး ယာဂန်ကလော့ကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ တကယ့်ကို ထူးခြားတိုက်ဆိုင်လှတဲ့ တောင်းဆိုမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး မေဆင်မောင့်ရဲ့ ပင်နယ်တီကို အလီဆွန်က ကာကွယ်ခဲ့ပြီးနောက် ဆီမီကတ်ဟာ ၁၂ ကိုက်ကနေ အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီကို ၀င်အောင် ကန်သွင်းယူခဲ့ပြီး လီဗာပူးကို အက်ဖ်အေဖလား ချန်ပီယံ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဂရိဘယ်နောက်ခံလူဟာ သူ့ရဲ့ ကန်ချက် ဂိုး၀င်ခဲ့ပြီးနောက် အပြင်းအထန် အောင်ပွဲခံသွားခဲ့ကာ ၀င်ဘာလေရဲ့ အနီရောင်ဘက်ခြမ်း ကလည်း ဒီရာသီရဲ့ ဒုတိယမြောက် ဖလားအောင်ပွဲနဲ့ အတူ အုံးအုံးကြွက်ကြွက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆီမီကတ်က ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းမှု မလုပ်မီ ကလော့ရဲ့ စကားပြောဆိုမှု လုပ်ရာမှာ ဘာကြောင့် ၇ ကြိမ်မြောက် ပင်နယ်တီကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆီမီကတ်က “ဒီနံပါတ်ဟာ ကျွန်တော့် အတွက် တကယ့်ကို စပယ်ရှယ် နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာက ပင်နယ်တီကန်ရာမှာ ကျွန်တော် ဘယ်နံပါတ်ကို လိုချင်သလဲဆိုပြီး မေးခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ် ၇ လိုချင်တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကလော့က မင်းဘာကြောင့် ဒါကို လိုချင်တာလဲ? ဆိုပြီး ပြန်မေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က နံပါတ် ၇ ကိုပဲ လိုချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနံပါတ် ၇ ဟာ ကျွန်တော့်ကို ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ အတွက် အခွင့်အရေး ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် မှန်ကန်တဲ့ ဘက်ခြမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီအတွက် တအားကို ပျော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်စွဲချင်ပါတယ်။ ရာသီအစက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ ဖလားတွေ ရယူဖို့ပါ။ အရမ်းကောင်းတဲ့ ရာသီအဆုံးသတ်ကို ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆီမီကတ်က လီဗာပူး အတွက် အက်ဖ်အေဖလား ရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ၀မ်းမြောက်နေပေမယ့်လည်း လက်ကျန် ဖလား ၂ လုံးအတွက် သူတို့ဟာ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ၀င်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အသင်းဖော်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဂရိနောက်ခံလူက “ကျွန်တော်တို့ ဒီပွဲမှာ အစွမ်းကုန် ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းဖော်တွေကို ဒီအတွက် ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပြင်းအထန် အောင်ပွဲခံသွားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့မှာတော့ အခြား အာရုံကို ပြောင်းရတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ ကျွန်တေ်ာတို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေ ကစားဖို့ ကျန်နေသေးသလို အရေးကြီးတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်လည်း ရှိနေပါတယ်။”
လီဗာပူးဟာ နောက် ၃ ရက်မှာ ဆောက်သမ်တန် နဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးဟာ ယနေ့ည ၀က်ဟမ်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ရမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားဖို့ မျှော်လင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီမီကတ်က “ကျွန်တော်တို့ အခု အောင်ပွဲခံသွားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ို့ စိတ်ထဲမှာ လာမည့် ပွဲစဉ်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကို ၁၀၀% အာရုံစိုက်သွားရမှာပါ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
Previous Article ‘ချဲလ်ဆီးအတွက် တကယ့်ကို ၀မ်းနည်းမိပါတယ်’ လို့ မက်ဆေ့ခ်ျစကားပါးလိုက်ကာ ဆာလားနဲ့ ဗန်ဒိုက်တို့ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကို ပြောပြသွားခဲ့တဲ့ ကလော့
Next Article FA king လီဗာပူး ၊ ဆာလာ ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေ ၊ ဆက်နေသူ ဆက်မနေသူတွေကြားက လီဝန်ဒေါ့စကီး ရဲ့ အကြောင်း တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ